Sergio Ramos oo ka hadlay mustaqbalkiisa garoonka Santiago Bernabeu – Gool FM
(Madrid) 25 Sebt 2019. Kabtanka kooxda Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa wuxuu shaaca ka qaaday rabitaankiisa ah inuu saxeexo qandaraas cusub uu sii joogi karo garoonka Santiago Bernabeu.
Sergio Ramos ayaa kaga soo biiray Real Madrid kooxda Seville sanadkii 2005-tii, isagoo u ciyaaray 600 kulan ee ah dhamaan tartamada kala duwan, wuxuuna kula guuleystay 20 koob.
Heshiiska uu Ramos haatan ku joogo garoonka Santiago Bernabeu ayaa wuxuu dhacayaa 2021, waxaana jiray warbixino xagaagii la soo dhaafay sheegayay in kabtanka kooxda Real Madrid uu ka fiirsanayo u dhaqaaqista horyaalka Shiinaha.
Dhankiisa 33 jirkan ayaa sheegay inuu ku aqbali karo arrinta ku saabsan kordhinta qandaraaskiisa kooxdiis Real Madrid mudo 5 daqiiqo ah oo kaliya, isagoo dhinaca kale carabka ku adkeeyay inaysan dhibaato aheyn arrintaas.
Sergio Ramos ayaa wareysi uu ku bixiyay “Radio Onda Cero” ee dalka Spain wuxuu ku sheegay:
“Ma jiraan wax dhibaato ah ee ku aadan Ramos, waxaan qandaraas kula jiraa Real Madrid, waxaana ka harsan sanad iyo bar”.
Ramos, oo xagaagii la soo dhaafay lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxaha Liverpool iyo Manchester United, ayaa kula guuleystay Real Madrid 3 koob oo horyaalka La Liga ah, iyo 2 jeer oo Copa del Rey ah, lagu daray 4 jeer tartanka Champions League ah.
Ilaa iyo haatan kaliya xiddigaha Raul, Iker Casillas, Manuel Sanchís iyo Santillana ayaa kula guuleystay kooxda Real Madrid koobab ka badan marka loo fiiriyo inta uu la qaaday Sergio Ramos.
Unai Emery oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan Bellerin kahor kulanka ay Man United ku wajihi doonaan horyaalka Premier League